‘काजक्रियाको चलिआएको रीतमाथि मेरो विश्वास छैन, काका ! त्यसैले म केही पनि गर्दिनँ’ | Ratopati
कर्मकाण्ड आमा र यमदूतहरु— ४
जातिवादको जग टेकेर उठेका आशङ्काले श्रीमतीको एक्लो हृदयमा पैदा गरेका भय
personखगेन्द्र संग्रौला exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १६, २०७७ chat_bubble_outline0
विहान पाँच बजे म ब्युँझिएँ । मेरा हात–गोडा त्यसैत्यसै विलाएका थिए । मन मरेको थियो । हिजो र आजमै यो कत्रो फरक ! हिजो बिहान म उठ्दा आमा जीवित हुनुहुन्थ्यो, मलिन आँखाले कसरी सिलिङतिर ट्वाल्ल हेरिरहनुभएको थियो !
“कस्तो छ, आमा ?” मैले सोधेको थिएँ । आमाले उदास र अवाक् दृष्टिले मलाई पुलुक्क हेर्नुभएको थियो । हिजो र आजमै यो कत्रो फरक ! आज आमा हुनुहुन्न । संज्ञाशून्य शरीर मात्र आमाको शेष भएर ओछ्यानमा पल्टिरहेको छ ।
हिजो र आजमै यो कत्रो फरक ! आज आमा हुनुहुन्न । संज्ञाशून्य शरीर मात्र आमाको शेष भएर ओछ्यानमा पल्टिरहेको छ ।
निन्द्रा खुलेर पनि मलाई उठ्न जाँगर लागेन । आमाको कोठामा जाने उत्सुकता पनि मभित्र जागेन । किन जाने ? के बाँकी छ हेर्न र म जाऊँ त्यहाँ ? त्यहाँ त केवल उदासी छ, केवल शून्यता छ, केवल रिक्तता छ । आमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रमाणका रूपमा जीवनको अवसान भइसकेको आमाको चीसो देहमात्र त्यहाँ छ । न्यानोपन निख्रिएको, बोली विसर्जन भएको, हाँसो हराएको, ममतामयी आँखामा जालो लागेर आँखाका पुतलीहरू सदाका लागि स्थिर भएको, चेष्टाशून्य देह मात्र त्यहाँ छ— जीवनको उराठलाग्दो बगरमा पल्टिरहेको मूढोजस्तो !
उद्विग्न र खिन्न मन लिएर म त्यत्तिकै झोक्राइरहेको थिएँ, निनुजी आइपुग्नुभयो । साढे पाँचै बजेतिर होला शायद ।
“अहो निनुजी ! सानेपादेखि यति सबेरै ?”
प्रत्युत्तरमा निनुजीका समभावयुक्त दृष्टिले मलाई शोकजन्य अभिवादन गरे । अलिबेरमा रुद्रजी आइपुग्नुभयो ।
“भान्जा, दिदी त जानुभएछ, हैन ?” रुद्रजीका आँखामा आँसु टलपल–टलपल भइरहेका थिए । रुद्रजीकी आदरणीय दिदीहुनुहुन्थ्यो हाम्री आमा । तिहारमा टीका र माला गाइदिएर सेलरोटी खान दिने दिदी । दिदी–भाइको नाता वर्षमा एकपटक आउने तिहारताकको निख्लो औपचारिकता मात्र थिएन, त्यसमा त भावमय अनुरागको गाढा रङ्ग पनि थियो । खोक्दै र खैनी माड्दै आएर रुद्रजी जब “दिदी” भन्नुहुन्थ्यो, आमाका हार मिलेका फटिक दाँत कति प्रसन्न भएर चकिन्थे ! अब मुस्कान प्रकट गर्ने ती ओठमा त्यो जीवन्त भावुकता र अनुराग छैन । अब आमालाई शोभा दिने र भोजनलाई सुपाच्य बनाइदिने ती अनारदाने दाँतलहरी बेवारिसे भएका छन्, ती सदाका लागि परित्यक्त भएका छन् ।
खोक्दै र खैनी माड्दै आएर रुद्रजी जब “दिदी”भन्नुहुन्थ्यो,आमाका हार मिलेका फटिक दाँत कति प्रसन्न भएर चकिन्थे ! अब मुस्कान प्रकट गर्ने ती ओठमा त्यो जीवन्त भावुकता र अनुराग छैन । अब आमालाई शोभा दिने र भोजनलाई सुपाच्य बनाइदिने ती अनारदाने दाँतलहरी बेवारिसे भएका छन्,ती सदाका लागिपरित्यक्त भएका छन् ।
“खै, दिदी कहाँ हुनुहुन्छ ?”
रुद्रजीको कति असहज र अमामयिक प्रश्न यो ? पल्लो कोठातिर सङ्केत गर्दै मौन भाकामा मैले उत्तर दिएँ— दिदीको शेष त्यहाँ छ, तिहारमा प्रेमले टीका गाइदिने दिदी कहिल्यै गोचर नहुने निराकार शून्यमा !
म सोफामा त्यत्तिकै पल्टिरहेको छु । रातिका आफ्ना असामान्य क्रियाकलापहरू सम्झन्छु, ती अर्ध–विक्षिप्त अनुभूतिहरू सम्झन्छु र म त्यसैत्यसै जिल्ल पर्छु ।
बाहिर इष्टमित्रहरूको बाक्लो चहलपहल सुरु भयो । बढ्दो पदचापको आवाज, बढ्दो गुनगुनको आवाज । त्यो सब सुन्छु र म उठ्न मनै नगरीकन त्यत्तिकै पल्टिरहन्छु । अब आमालाई पानी खुवाउनु छैन, दूध खुवाउनु छैन, अनारदाना खुवाउनु छैन । मैले उठ्न किन हतार गर्नु ?
मेरो मनको तरङ्ग व्यवहारिक बन्दोबस्ततर्फ उन्मुख भयो । यो सहरमा अब बाँस कहाँ खोज्ने होला ? कोसँग खोजिमाग्ने होला ? अघि सरेर हात बढाइदिने जाँगरिलो उपकारी को होला ?
बाफ रे ! त्यति सबेरै त्यतिका मानिस कसरी जुटेका होलान् ?कसले कटुवाल भएर त्यति फराकिलो वृत्तसम्म आवाज पु¥याइदियो होला ?हेर्छु,पिँडीमा खुट्टो हाल्ने ठाउँ छैन । गेटसम्मको बाटो खचाखच छ ।
“बाहिर जाऊँ भान्जा ।” भित्र पस्दै रुद्रजीले मेरो हात समातेर भन्नुभयो । अररिएका गोडा तन्काउँदै र आहत हृदयलाई सम्हाल्दै उठेर म बाहिर गएँ । बाफ रे ! त्यति सबेरै त्यतिका मानिस कसरी जुटेका होलान् ? कसले कटुवाल भएर त्यति फराकिलो वृत्तसम्म आवाज पु¥याइदियो होला ? हेर्छु, पिँडीमा खुट्टो हाल्ने ठाउँ छैन । गेटसम्मको बाटो खचाखच छ । आरुको विरुवा वरिपरिको बगैँचामा भीडमभीड छ । रगतको नाताका बन्धु–बान्धवहरू त्यहाँ छन्, विचारको नाताका कमरेडहरू त्यहाँ छन्, टोल–छिमेकका चिनारुहरू त्यहाँ छन्, आक्कल–झुक्कल देखभेट भएकाहरू त्यहाँ छन् र कहिल्यै कतै देखभेट नभएका विराना अनुहारहरू पनि त्यहाँ छन् । सहृदयी र सहयोगी, ओरका र परकाहरूको त्यो अप्रत्याशित जमघट देख्दा मलाई “मर्दापर्दा” भन्ने लोककथनको सम्झना भयो । “बाँच्दाका जन्ती, मर्दाका मलामी”— अर्को कथन मेरो मानसपटमा नाच्न थाल्यो । विचारको द्वन्द्वले पैदा गरेका कटु भावनाहरूलाई थाती राखेर मानिसहरू त्यहाँ आएका छन् । मतभेदका लछुमन रेखाहरूलाई नाघेर मानिसहरू त्यहाँ जुटेका छन् । त्यति मात्र कहाँ र ? अपरिचयका पर्दाहरू पन्छाउँदै मानिसहरू एकाबिहानै त्यहाँ उपस्थित भएका छन् । त्यो अनपेक्षित सद्भाव, के को लक्षण हो त्यो सब ? लोकलाजको ? निख्लो औपचारिकताको ? मृत्युप्रतिको त्रासको ? मृत्युले जगाएको वैराग्यको ? आडम्बरी अभिनयको ? कि सङ्कटकालीन सहयोग र सह–अस्तित्वको ? तथ्य जेसुकै होस्, मैले भने विविध चरित्रको त्यो व्यापक उपस्थितिमा शोक र वेदना बाँडचुँड गर्न तत्पर भएका मनकारी जनहरूको हार्दिक उपस्थिति महसुस गरेँ । अथवा आर्तहरूका हृदयका चह¥याइरहेका घाउमा मानवीय करुणाले युक्त भएर स्वेच्छाले मलम लगाइदिन आएको घाइते भावनाका उपचारकर्मीहरूको । तर जब ती सहस्र सहृदयीहरूका आँखा–आँखामा मतर्फ लक्षित उदासीको गाढा छाया देखेँ, म हठात् मर्माहत भएँ । म यी सारा आँखाहरूको सहानुभूतिको पात्र ? आज आमा नहुँदा म कति निरीह ? म कति दुर्बल ? मृत्युले घोषणा गरेको सङ्कटकालका मुखेन्जी म कति फुकिढल, जसलाई ढल्न नदिन यतिका मानिसहरूको सहारा नभई नहुने ?
मनको भुमरीमा उही बाँसको समस्या फन्फनी घुमिरहेको थियो । मेरा आँखा टुक्रुक्क बसिरहेका एकजना मानिसमाथि परे । शशी कुइँकेल ! हाम्री आमालाई सुताउने बाँस त अघि नै आइसकेछन् । शशीजी बाँसका दुई नोलमाझ बाबियाका डोरीले भाँटा बाँध्न तल्लीन हुनुहुन्छ । त्यो देख्दा कुइँकेल बाबुका सहयोगी हातले थिचिरहेको सगरलाई उचालेर पन्छाइदिएजस्तो अनुभूति भयो मलाई । अब भने मेरो मन किञ्चित् हलुङ्गो भयो ।
नेत्र काकाले आफ्नो पाखुरोमा मेरो पाखुरो उनेर मलाई भित्र पल्लो कोठाको ओछ्यानमा लैजानुभयो, जहाँ छोरो मित्र अझै सुतिरहेको थियो । बडो गम्भीर मुद्रामा काकाश्रीले खटन गर्नुभयो, “बाबु ! दुइटा लगौँटी र दुइटा धोतीलाई कपडा किन्न पठाउनुप¥यो ।”
लगौँटी र धोती ? म झसङ्ग भएँ ।
“काका, त्यो चाहिँदैन ।”
“हैन बाबु, चाहिन्छ ।”
“काजक्रियाको चलिआएको रीतमाथि मेरो विश्वास छैन, काका । त्यसैले म केही पनि गर्दिनँ । आमाका लागि जो सकेको मैले गरिसकेँ ।”
“काजक्रियाको चलिआएको रीतमाथि मेरो विश्वास छैन,काका । त्यसैले म केही पनि गर्दिनँ । आमाका लागि जो सकेको मैले गरिसकेँ ।”
नेत्र काका स्तव्ध हुनुभयो । मानौँ नीलो आकाशबाट काकाश्रीका थाप्लामा बज्र चङ्किन आइलाग्यो । यो के भनेको होस् तैँले ? काकाका आश्चर्य–चकित दृष्टिले मलाई भनिरहेका थिए । मेरो त्यो विचार उहाँले कहिल्यै सपनामा पनि नचिताएको कुरा थियो सायद । भन्नै नहुने विचार, सुन्नै नसकिने विचार ! एकदम भयङ्कर !
नेत्र काका मेरा काका–बाबुहरूको पुस्ताका सबैभन्दा उदार विचारका व्यक्ति हुनुहुन्छ । जन्मे–हुर्केका सामन्ती घरानामा तर आफू भने सामन्ती हैकम विरोधी । तैपनि मेरो त्यो विचार सुन्दा उहाँलाई भयावह कष्ट भएझैँ लाग्यो मलाई ।
“बाबु, संसार तिमीजस्तो छैन । लोकलाजको कुरा छ ।”
“काका, म अनुचित लोकलाजको अवज्ञा गर्छु ।”
“देख्नेले बाबु, तिमीलाई अर्थ–अनर्थ भन्लान् ।”
“भनून् काका, म सुन्न तयार छु ।”
मेरो जब्बर जिरह सुनेर काकाका दाँतमा ढुङ्गा लागे । अलि कम उमेरको कोही भतिजो हुँदो हो त काकाले कठोर स्वरमा कर गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला । तर नाताले काका–भतिजा भएपनि हाम्रो उमेरमा उत्रो दूरी छैन । फेरि हाम्रो सम्बन्ध छ बिल्कुलै मित्रवत् । काकालाई उल्कासरीको भाउँतो आइलाग्यो । मुद्रामा चिन्ताको गाढा छाप लिएर लामो सुस्केरा हाल्दै उहाँ अवाक् भएर बाहिर निस्कनुभयो ।
म बाहिर निस्कँदा आमालाई बाहिर निकालिसकेका रहेछन् । पिँडीको डिलमा अघि नै कात्रोले आमालाई बेरिसकेछन् । शव बोक्ने बाँसको डोला आमाकै छेवैमा हाराहारी पल्टिरहेको छ । बैरागलाग्दो त्यो दृश्य देख्दा मेरो मुटुको चाल टक्क अडिएझैँ भयो । अहिले पो मलाई एक्किन भयो, हाम्री आमा सकिएकै हुन् । अब आमाको चीसो शवमात्र बाँकी छ, जसलाई खरानी बनाउन आर्यघाटतिर चलान गर्न दु्रततर तयारी हुँदै छ । हठात् मेरो मुटुमा भक्कानो फुट्यो । चस्मा फुकालेर सानो तौलिया रुमालले म आँसु पुछ्न थालेँ ।
शव बोक्ने बाँसको डोला आमाकै छेवैमा हाराहारी पल्टिरहेको छ । बैरागलाग्दो त्यो दृश्य देख्दा मेरो मुटुको चाल टक्क अडिएझैँभयो । अहिले पो मलाई एक्किन भयो,हाम्री आमा सकिएकै हुन् । अब आमाको चीसो शवमात्र बाँकी छ,जसलाई खरानी बनाउन आर्यघाटतिर चलान गर्न दु्रततर तयारी हुँदै छ । हठात् मेरो मुटुमा भक्कानो फुट्यो ।
नाताले दाजु पर्ने तर उमेरले कुलका जेठा र बाठा धनपति दाई लमक–लमक लम्किँदै म भएठाउँमा आउनुभयो र मलाई धाप मारेर वैराग्यको भाकामा भन्न थाल्नुभयो, “भाइ, अब रोएर केही काम छैन । मनुष्यको अनित्य चोला हो । भुलुक्क पानीको फोको उठेको थियो, अहिले यीः त्यो प्याट्ट फुट्यो । सबैको जाने बोटो यही भो, भाइ । कसैको छिटो, कसैको ढिलो । लु, आमालाई काँध थाप् ।”
शोकाकुल वातावरणलाई झनै शोकाकुल बनाउने गरी शङ्खको एकोहोरो धुन बज्न थाल्यो— टुँ ....... । प्रियजनको अवसान हुँदा जीवित रहेका प्रियजनहरूका थकित र विह्वस चित्तमा मर्मान्तक आघात त यस्सै पनि परेकै हुन्छ । उसमाथि त्यो आलो घाउमा नुनचुक लगाउने खालको यस्तो कुरूप धून किन बजाउनुपरेको होला ? उहिल्यै पिता–पुर्खाका पालामा स्वरले सम्चार पु¥याउन नसकिने ठाउँका आफन्तहरूलाई मृत्युको जनाउ दिन पो यो चलन चलेको हो कि ? समय कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, तैपनि बिरालाका घाँटीमा घण्टी बाँध्ने यो चलन ज्यूँका त्यूँ छ । मृत्यु उसै त कुरूप चिज हुँदै हो, त्यो कुरूपलाई झन् विद्रूप बनाउने यो चलन किन कहिल्यै नमासिएको होला ? चरम् अप्रिय, कुरूप र कष्टकर लाग्ने यस्तो शङ्ख–ध्वनिप्रति ममा बालककालदेखि नै उग्र घृणा रहिआएको हो । अपरिचितहरूको मृत्युमा बज्ने यस्तो शङ्ख–ध्वनि सुन्दा पनि त्यसले मेरो हृदयलाई त्यसैत्यसै चिराचिरा पारिदिन्थ्यो । अहिले त आफ्नै आमाको मृत्युमा बजेर यसले उत्पात मच्चाइरहेछ । म क्रुद्ध छु, आहत छु, र आमालाई काँध थाप्न नसकेर मूर्तिवत् उभिइरहेको छु ।
छोरी डेजी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको छात्राबासबाट आइपुगी । हेरेँ, उसको मुखाकृति भावहीन, सपाट थियो । बाहिरको खल्बली सुन्दै अल्लि अघिसम्म सिरकले गुम्लुङ्ग मुख छोपेर सुतिरहेको लम्बु छोरो ढोकै ढाकेर ढोकामा उभिन आइपुग्यो । मैले कल्पना गरेको थिएँ— हजुरआमाको मृत्युमा यिनीहरूले कोलाहल मच्चाउलान् । तर कण्ठ खोलेर दुबैजना रोएनन्, न तिनका आँखाबाट आँसु नै भल्भली बग्यो । प्रस्तरका मूर्तिजस्ता लाग्ने तिनका अनुहारमा केवल हजुरआमाको मृत्युको पिडादायी छायामात्र थियो । मैले तर्कना गरेँ, कोमल भावनाका अदृश्य सांस्कृतिक सूत्रहरूले तिनका हृदयहरूलाई हजुरआमाको हृदयसँग उनेका थिएनन् क्यार । बालककालमा तिनले मायामोह बस्ने गरी न हजुरआमाको न्यानो काखमा खेल्न पाए, न हजुरआमाको लाडप्यारको छहारीमा तिनले शीतल ताप्न पाए । हजुरआमाका मुखबाट रसिलो लोली गाएको सुन्ने अवसर पनि तिनलाई कहिल्यै भएन । न त हजुरआमाका मुखबाट रोमाञ्चक कथा–किस्साहरू सुन्ने सौभाग्य नै तिनलाई कहिल्यै प्राप्त भयो । त्यसैले तिनका दृष्टिमा हजुरआमा बुबाकी आमा हुनहुन्थ्यो । बस्, त्यत्ति हो ।
श्रीमती ढोकाको खापामा आड लागेर पछ्यौरीले आँसु पुछिरहेकी थिइन् । बाहिर भेला भएका सबैजसो सहयोगी इष्टहरू बाहुन वा क्षेत्री थिए, उनी आफू परिन् गुरुङ । सके त्यो क्षणमा उनलाई नितान्त एक्लोपन र विरानोपनको कटुतायुक्त अनुभूति भइरहेको हुँदो हो । बाहुनी सासुको शवलाई गुरुङ बुहारीले छुनु हुने कि नुहने ? बाहुन–क्षेत्रीहरूका बीचमा आफू उभिन पाइने कि नपाइने ? सके जातिवादको जग टेकेर उठेका यस्ता आशङ्काहरूले उनको एक्लो हृदयमा भय पैदा गरेका हुँदा हुन् । त्यसैले उनी अछूतझैँ अलग्गै, एक्लै उभिएर पछ्यौरीले मुख छोपेर त्यही पछ्यौरीले आँसु पुछिरहिन् ।
बाहुनी सासुको शवलाई गुरुङ बुहारीले छुनु हुने कि नुहने ?बाहुन–क्षेत्रीहरूका बीचमा आफू उभिन पाइने कि नपाइने ?सके जातिवादको जग टेकेर उठेका यस्ता आशङ्काहरूले उनको एक्लो हृदयमा भय पैदा गरेका हुँदा हुन् । त्यसैले उनी अछूतझैँअलग्गै,एक्लै उभिएर पछ्यौरीले मुख छोपेर त्यही पछ्यौरीले आँसु पुछिरहिन् ।
“दाइ, आमालाई काँध दिनोस् ।” हुकमी भाकामा जारी गरिएको त्यो आदेश शशी कुइँकेलको थियो । आदेश पालना गर्दै मैले काँध दिएँ ।
“त्यताबाट हैन यताबाट ।”
मैले काँध उता सारेँ । अनि शङ्खको उही उच्चाटलाग्दो एकोहोरो ध्वनिसँगै मलामीको लामेताँती लाग्यो आर्यघाटतिर ।
आफैले जानेर हो कि कसैले सिकाएर हो थाहा छैन, छोराले कुद्दै आएर बीच बाटामा हजुरआमालाई काँध दियो ।
“भाइले त दियो, तिमी पनि हजुरआमालाई काँध दिने होइन ?” मेरो हात समातेर हिँडिरहेकी छोरीलाई मैले सोधेँ ।
छोरीले वाल्ल परेर मलाई हेर्दै शिर झुकाई ।
“मृतकको आफने मान्छे को हो ?” घाटमा चितानेर आमालाई विसाएपछि घाटे पुरोहितले सोध–खोज गरे ।
“बाबु हो ।” नेत्र काकाले मलाई लक्ष्य गरेर भन्नुभयो ।
“मृतकसँगको नाता के हो ?” पुरोहितले सोधे ।
“आमा ।” मैले निवेदन गरेँ ।
“जुत्ता फुकाल्नोस् ।”
बाजेको पहिलो राउन्ड आदेश मैले पालन गरेँ ।
“कपाल खौरिनोस् ।” पुरोहितले दोश्रो राउन्ड आदेश जारी गरे ।
नेत्र काकाले पुरोहितलाई अर्थ्याउनुभयो— जेठाबाठा छोराहरू मधेसमा छन् । काजक्रियाको सबै कर्म उतै सम्पन्न हुन्छ । यहाँ त खालि दाहसंस्कार मात्र गर्ने हो । त्यसपछि आफ्नो व्याख्यामा नाटकीय रफ्फु भर्दै काकाश्रीले मेरो पक्षमा कुराको विट मार्नुभयो, “बाबुले बसमा जानुपर्छ । बाटामा छोइएर विटुलिनु राम्रो हुँदैन । त्यसैले यसले गर्नुपर्ने यावत् विधि मधेसमै गएर सुरु गर्छ ।”
“मृतकसँग नाता के हो ?” उत्तर दिइसकेको प्रश्न आक्रामक मुद्रामा दोहो¥याउँदै पुरोहित ममाथि खनिए ।
“नाता आमा–छोरा हो ।”
“आमा मर्दा छोराले कपालधरी नखौरिने ?”हिंस्रक चितुवाले निरीह छतौरालाई हेर्ने आँखाले पुरोहित बाजेले मलाई हेरे । आर्यघाट उनको एकछत्र साम्राज्य हो । उनी त्यहाँका अधिपति सम्राट । सांस्कृतिक क्रान्तिका अग्निमय भाषण गर्ने कत्राकत्रा महारथीहरूलाई थर्काएर घुँडा टेकाउँदै उनले कपाल मुण्डन गराएका छन् ।
“आमा मर्दा छोराले कपालधरी नखौरिने ?” हिंस्रक चितुवाले निरीह छतौरालाई हेर्ने आँखाले पुरोहित बाजेले मलाई हेरे । आर्यघाट उनको एकछत्र साम्राज्य हो । उनी त्यहाँका अधिपति सम्राट । सांस्कृतिक क्रान्तिका अग्निमय भाषण गर्ने कत्राकत्रा महारथीहरूलाई थर्काएर घुँडा टेकाउँदै उनले कपाल मुण्डन गराएका छन् । उनलाई थाहा छ, उनको साम्राज्यमा जो आउँछ, त्यो परैदेखि उनका पाउमा मुन्टो निहुराउँदै आउँछ । उनी उठ् भन्छन्, त्यो उठ्छ । उनी बस् भन्छन्, त्यो बस्छ । उनी घुँडा टेक् भन्छन्, त्यसले घुँडा टेक्छ । उनी कान समात् भन्छन्, त्यसले थपक्क कान समात्छ, । उनका सवै आदेशहरूको जवाफ उनको आशयबमोजिमको क्रियाद्वारा सम्पन्न हुन्छ । उनले देखेका छन्, कत्राकत्रा मै हुँ भन्नेहरूलाई कत्राकत्रा मै हुँ भन्नेहरूका शव ब्रह्मनालमा सुताउन लगाएर उनले विरालो बाँध्ने विधि सम्पन्न गराएका छन् । उनले देखेका छन्, नेताश्रीको शव तल ब्रह्मनालमा सुताएर कार्यकर्ताहरूले माथि कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय गाएका छन् । कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियको गान ब्रह्मनाललाई समर्पित गरिएको देखेर उनी कतिपटक दिग्विजयको मुद्रामा हाँसेका छन् । हो त नि, त्यो उनको साम्राज्यको अखण्ड जीत हो । उनले त्यस्ता–त्यस्ता र त्यत्रा–त्यत्राहरूलाई त चुट्कीका भरमा घुँडा टेकाएका छन् भने म को हुँ र उनले मलाई विशेष छुट दिने कृपा गरुन् ?
“याँ हुँदैन । लौ, कपाल खौरिहाल्नोस् ।”
मलाई पुरोहित बाजेसँग एक राउन्ड बहस गर्न मन लाग्यो । स्वरमा अलिकति दम भरेर मैले भनेँ, “तपाईँ आफ्नो ज्यालाधारी विधि आफ्नो ढङ्गले गर्नोस् । मैले गर्नुपर्ने विधि म आफ्नै ढङ्गले गर्छु ।”
पुरोहितले हान्ने अर्नाका आँखाले मलाई दागा धरे । म पनि उनलाई सोझै हेरेर उनका अगाडि ठिङ्ग उभिएँ । लौ, यिनको झडप पर्ने भो— नेत्र काकालाई लाग्यो होला । त्यसैले युद्ध सुरु हुनुअघि नै युद्धविराम गराउने मनसायले काकाले बाजेलाई अर्को एक लेक्चर पिलाउनुभयो । बाजे बल्ल आफ्नो आतेपातेपथको सुतीखेतीतर्फ प्रवृत्त भए ।
काम्दो हातले मैले मेरो जीवनको सबैभन्दा प्रिय पात्रका मुखमा दागबत्ती दिएँ । ज्यालादारी पुरोहित्याइँ सम्पन्न गर्ने क्रमको अन्तरालमा जब बाजेलाई फर्सद हुन्छ, उनी प्रतिशोधको भाव भरिएका दृष्टिले मलाई पुलुक्क हेर्छन् । बाजेको हेराइ मलाई असह्य हुँदै गयो । त्यसकारण बाजेका दृष्टिलाई छल्न म पर अलग्गै बसेँ । आमाको शव जति–जति जल्दै भष्म–खरानी भएर बागमतीमा बग्दै गयो, मेरो हृदयमा आमाले ओगटेको ठाउँ त्यति–त्यति रित्तो हुँदै गयो । जब चिताको शेष खरानीलाई पखालेर वागमतीमा बगाइयो, विराट् रिक्तताबाहेक मेरो अन्तरमा केही बाँकी रहेन ।
अलिबेरअघिसम्म कम्तीमा पनि आमाको भौतिक देह त बाँकी थियो । अब त्यही पनि खरानीमा परिणत भई बागमतीमा बगेर अलप भयो ।
#आमा र यमदूत#खगेन्द्र सङ्ग्रौला#खगेन्द्र संग्रौला